Xarakada Alshabaab oo Qiratay in ay ka dambeeyeen Qaraxyadii Nairobi, – SBC
Xarakada Alshabaab oo Qiratay in ay ka dambeeyeen Qaraxyadii Nairobi,
Posted by Webmaster on October 27, 2011 Comments
Baan baxyadan oo ay soo qaban qaabiyeen xarakada mujaahindiinta Alshabaab ayaa waxa ay ka dhaceen gobolada SHabeelaha Hoose, Shabeelaha dhexe iyo weliba Hiiraan.
Waxaa baanbaxyadan ka qeyb galay masuuliyiinta sar sare ee xarakada Alshabaab Almujaahidiin, gaar ahaan kuwii ka dhacay gobolka Shabeelaha hoose,
Banaan baxan oo loogaga soo horjeeday soo gelitaanka ciidamada Kenya qeybo ka mid ah gobolka jubada hoose ayaa waxaa ka hadlay saraakiisha ugu sareysa sida Sh Cali Maxamuud Raage Sh Cali dheere, Sh Muqtaar Roobow Amumansuur iyo weliba sh Xasan Daahir AWeys.
Bulshada ku dhaqan goboladaasi ayaa ay isugu soo bexeen goobo fagaare ah taas oo ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan in ciidamada Kenya ay gudaha u soo galeen gudaha SOomaaliya iyagoona sheegay in dowlada Kenya ay dhibaatooyin ku hayaan shacabka soomaaliyeed.
Sh Xasan Daahir Aweys ayaa Dowlada Kenya u jeediyay Hanjabaad isagoona sheegay in dowlada Kenya hadii ay joojin weyso dhibaatooyinka ay ku heyso shacabka soomaaliyeed ay ka shalaynayaan isagoona sheegtay in ay ka dambeeyeen Qaraxyadii dalkaasi ka dhacay.
Afhayeenka Xarakada Alshabaab Sh Cali Dheere Ayaa u diray Fariin dowlada Kenya isagoona ugu baaqay in ciidamadeeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay dib ula noqoto hadii ay dooneyso wada noolaansho.
Gebi ahaan shacabkii ka soo qeybgalay Banaan baxyadaasi ayaa waxaa ay muujinayeen sida ay u diidan yihiin ciidamada Kenya eek u sugan gudaha dalka gaar ahaan gobolada jubooyinka, iyagoona ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dowlada Kenya.
Maxamed C/laahi Faarax